PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2019-01-10 - Iimveku ezizalwe ngeNyibidyala eKapa
Iimveku ezizalwe ngeNyibidyala eKapa
Isolezwe lesiXhosa - 2019-01-10 - IINDABA -
ngomsebenzi oncomekayo wokuzalwa kwabantwana ngomhla weNyibidyala.
Umntwana wokuqala ulibone ilanga kwimizuzu engephi ibethile intsimbi yeshumi elinesibini, ezinzulwini zobusuku ngomhla wokuqala.
Le mveku izelwe kwisibhedlele saseMitchells Plain inobunzima obuyi 3.5kg kwimizuzu engamashumi amabini anethoba ibethile iintsimbi yeshumi elinesibini ekuseni kwazalwa umntwana wesibini onobunzima obuyi 2.98kg kwisibhedlele sasePaarl.
Umntwana wesithathu ubelekwe enobunzima obuyi 1.91kg kwimizuzu esibhozo phambi kokuba kubethe iintsimbi yokuqala ekuseni kwisibhedlele saseGeorge.
Isibhedlele saseGeorge sesona siye saxakeka kwigumbi lokubelekisa nanjengoko ezinzulwini zobusuku obandulela iNyibidyala kwazalwa abantwana abangamashumi amabini; ishumi lamakhwenkwana neshumi lamantombazanana.
Esinye sezibhedlele ebesixakekile yiKarl Bremer nanjengoko kuzelwe abantwana abangamashumi amabini; ishumi elinanye lamakhwenkwana nesithoba lamantombazanana.
Ngomhla weNyibidyala kwazalwa amawele angamantombazana phambi kwentsimbi yesibhozo kusasa.
Iwele elivele kuqala linobunzima obuyi 2.39kg logama elesibini esikalini belingu 2.295kg.
Kwisibhedlele saseMowbray kwigumbi lokubelekisa kwazalwa amawele angamakhwenkwe ngecala emva kwentsimbi yeshumi elinesibini emini kwazalwa iwele lokuqala linobunzima obuyi 2.06kg ze emva kwemizuzu emibini ibethile intsimbi yokuqala emini kwalandela elesibini linobunzima obuyi 1.860kg.
La mawele ashiyana ngamashusmi amathathu ananye emizuzu.
“Ndithi huntshu kubazali abathe bafumana abantwana ngomhla wokuqala kule nyanga. Ndibanqwenelela okuhle kodwa xa bekhulisa iintsana zabo. Kwiintsuku ezilikhulu zokuqala basekwimeko ebuthathaka; bafuna uthando, banakekelwe, batye ukutya okusempilweni” utshilo uGqirha uNomaFrench Mbombo, umphathiswa wezempilo eNtshona Koloni.